BANYERE US - Aquagem Pool mgbapụta Frequency Inverter
Inverter Pool mgbapụta
agbanwe Speed Pool mgbapụta
Akwụkwọ ikike & Service Atumatu
Anyị ozi bụ ịnọgide na ọdọ mmiri ndị ọrụ na-enweta na mma na uru ada site na smart technology ma belata anyị carbon dioxide ụkwụ ebipụta, nke a na-eje ozi dị ka a na-edu anyị ọrụ ofụri Filiks nke R & D, mmepụta, ahịa, ahịa & ọrụ, wdg
Ahịa ahụmahụ bụ ihe niile. Ọ bụla ọdọ mmiri ọrụ kwesịrị a na-eri-irè + ezi mma + pụrụ ịdabere na ọdọ mmiri usoro iji mee ka ọtụtụ ihe na ha na ulo oru mbo na-enwe a na ezinụlọ ọdọ mmiri ndụ.
Nka na ụzụ R & D
Gawa site 6 isi injinia onye nka nọ VFD na inverter technology, anyị bụ ndị mpako na-enwe a ike R & D otu onye nọgidere abịa na otutu echiche.
All ngwaahịa gafere anyị siri quality nnyocha tupu nnyefe, na ọ nwere mgbochi nchara, mgbochi mmiri, mkpuchi ọgwụgwọ maka electronic mbadamba, eletriki ọrụ ule maka ọkara okokụre ngwaahịa, ịka nká ule na 60 ogo centigrade zuru arụmọrụ nnyocha na okokụre ngwaahịa, simulate ngwaahịa na usoro nke na intensification ule na-ezo aka ihe dị iche iche na-emetụta ngwaahịa merela agadi n'okpuru kpọmkwem ọnọdụ.
Jikọọ Anyị Global Network of Distributors!
Copyright @ AQUAGEM All Rights echekwabara